Maxay yihiin waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsanayso gurigaaga ugu horreeya? | Ragga Stylish
Iibsashada gurigaaga ugu horeeya waa daqiiqad aad muhiim ugu ah nolosha dadka. Waa weji ina keena madaxbanaanida, amniga, barwaaqada iyo rajada mustaqbal ee umuuqata gacmaheena.
Tallaabo kasta oo aan qaadno waxay noqon kartaa mid muhiim ah mustaqbalna xaalad. Sidaa darteed, kahor tixgelinta kaliya dhinacyada sida goobta ama baaxadda goobta, waxaan ka fekeri doonnaa ku beddelayaal badan oo badan.
1 Indho maalgelin
2 Dhalinyarada iyo dalacsiintooda
3 Xilliga ugu habboon ee wax iibsiga
4 Talada aqoon yahanka
5 Miisaaniyadda macquul ah
Falanqaynta waxyaabaha ku xeeran amaahda hadda, waxa ugu fiican ayaa ah in la helo lacag keyd ah si loo wajaho iibsiga guriga. Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in hay'adaha amaahdu aysan bixin wax ka badan 80% maanta.
Dhalinyarada iyo dalacsiintooda
Haddii aad da 'yar tahay, waxaad ka faa'iideysan kartaa xaaladaha ugu fiican ee deynta. Caadi ahaan, amaahda dhalinyarada waxaa lagu suuqgeeyaa dulsaar hoose. Waxay sidoo kale ka kooban yihiin gargaarka ciribtirka guddiyada waaweyn. Tallaabooyinkan, kaydinta ayaa la xoojin doonaa marka la daboolayo dalabkan.
Xilliga ugu habboon ee wax iibsiga
Guriga koowaad waa arrin aad muhiim u ah. Waana lagama maarmaan in loo hibeeyo waqtiga ku habboon. Waxay qaadan doontaa shaqo deggan oo wanaagsan in la helo dabaqa la doonayo. Looma baahna in la sameeyo khaladaad aad hadhow ka qoomamayn karto.
Talada aqoon yahanka
Maqnaanshaha waayo-aragnimada hawlgalladan, waxaa lagu kabi karaa talobixin xirfadeed. Sidoo kale way caawisaa talo ka hel qof kuu dhow. Macluumaadka noocan ahi waxay noqon doonaan kuwo tayo leh oo caawimaad weyn leh marka aad iibsanayso gurigaaga.
Miisaaniyadda macquul ah
Caadi ahaan, waxay noqon doontaa sanado badan oo loogu talagalay bixinta amaahda. Sidaa darteed, waa inaadan dhicin khaladaadka sida caadiga ah sida jacaylka guri ama ku noolaanshaha wixii ka baxsan fursadaha shaqsiyeed. Waxaad u baahan tahay inaad la qabsato oo aad qorsheysato, iyadoo kuxiran dakhliga aad hesho.
Ilaha Sawirka: Maaliyadda Qofka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Waxyaabaha maskaxda lagu hayo marka aad iibsaneyso gurigaaga ugu horeeya